Madaxweyne Farmaajo oo saxiixay Miisaaniyadda 2019 – Kalfadhi
Madaxweynaha Janhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Maxamed Cabdullahi Farmaajo, ayaa saxiixay Miisaaniyadda Dowladda ee sanadkan 2019-ka, kadib markii ay Xildhibaannada Golaha Shacabku ku meel-mariyeen kulankii ay yeesheen Axaddii.
War qoraal ah oo kasoo baxay Xafiiska Madaxweynaha ayaa lagu sheegay inuu Madaxweynuhu ku bogaadiyey Xildhibaannada Golaha Shacabka sida xilkasnimada leh ee ay u guteen waajibaadka dastuuriga ah ee kaga aaddanaa qiimeynta iyo ka doodista miisaaniyadda sannadlaha ah ee dowladda, sida uu hadalka u dhigay. Farmaajo waxa uu faray Xukuumadda in ay xoogga saarto dardargelinta adeegyada bulshada, kobcinta fursadaha shaqo ee dhallinyarada iyo xaqiijinta amniga muwaadiniinta Soomaaliyeed.
Madaxweyne Farmaajo waxa uu yiri “kobaca dakhliga dalka waxa uu markhaati ka yahay miro-dhalka qorsheyaasha ku qotoma la dagaalanka musuqmaasuqa”. Waxa uu, sidaasdaraadeed, Madaxweynuhu sheegay iney qasab tahay iney dowladdu ka sameyso isbeddelo muuqda dhinacyada bulshada, amniga iyo hirgelinta kaabeyaasha dhaqaalaha, “si” buu yiri “ay dadkeennu u helaan nolol wanaagsan”.
Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa meelmariyey Miisaaniyadda 2019-ka maalin ka hor sanadka cusub oo maanta curtay. Waxay un ansixiyeen si deg deg ah, sababtuna waxay ahayd iney ugu yaraan 9 kulan, oo ay uga doodi lahaayeen, ku baajiyeen khilaaf u dhaxeeyey Golaha, gaar ahaan Gudoonkiisa.
Aqalka Sare, oo isu diyaarinayey inuu wax ka ansixiyo miisaaniyadda, ayaa halkaas ku waayey sanadkii 2-aad mudnaantaas, sababtana lama oga iney tahay wax la xiriira dhinaca sharciga iyo in kale. Shalay ayuu Goluhu doonayey inuu ku guuleysto iney soo gaarto miisaaniyadda, laakiin ma dhicin, mana qabsoomin kulankii ay uga arrinsan lahaayeen.
Wasaaradda Maaliyaddaayaa horay u sheegtay in uu jiro korar muquda oo ku yimid Miisaaniyadda Sanadkan, taas oo ka imaaneysa dakhliga gudaha, waxaana Madaxweyne Farmaajo oo ka hadlaya arintaas, kadib meelmarinta Miisaaniyadda, uu yiri “miisaaniyaddan qeybta ugu badan waxa ay ku suntan tahay dakhligeenna gudaha, taas oo muujinaysa kartideenna iyo sida ay nooga go’an tahay in dalkeennu uu la jaanqaado dalalka kale ee caalamka, isla markaana uu gaaro maqaamka iyo maamuuska uu mudan yahay”.